XDM: GNU / Linux အတွက် Accelerator နှင့် Video Downloader ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ Linux မှ
အခြေခံအားဖြင့်သာမန်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူကလိုချင်သည် အင်တာနက်ကို အရာနှစ်ခု။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အင်တာနက်ကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း (သို့) အကန့်အသတ်မဲ့သောအင်တာနက်အကြောင်းအရာနှင့်ပျော်မွေ့နိုင်ခြင်း၊ download, အခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကြောင်းပြချက်များအရ၎င်းကိုလက်လှမ်းမီရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးဖြစ်လျှင်၊ သင့်တွင်အင်တာနက်မရှိပါသို့မဟုတ်ပြproblemsနာများသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုနှေးကွေးခြင်းမရှိပါ။
ထိုကြောင့်၊ မကြာခဏ download ပြုလုပ်မှုများအားစီမံခန့်ခွဲရန် browser ကောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် desktop application တစ်ခုရှိခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူအတွက်မဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကြား Web Browser Plugins များလူသိများတဲ့ « Video Downloadhelper » နှင့်အကြား Cross-platform Desktop Application များများသောအားဖြင့်ပျေါလှငျ "JDownloader2"။ သို့သော်အဆုံးစွန်ထက် ပို၍ များသောအရာများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ XDM သို့မဟုတ်ပိုကောင်းအဖြစ်လူသိများ Xtreme Download Manager.
အမှန်ပင်သတိပြုသင့်သည် JDownloader2၎င်းသည်အခြားပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောကြီးမားသည့်အသိုင်းအဝိုင်း၏ပံ့ပိုးမှုကိုလည်းရရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ်ဒေါင်းလုပ်များကိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစေသည်။
အကြောင်းမှာဤလက်ရှိထုတ်ဝေမှုကိုဖတ်ပြီးနောက် Xtreme Download Managerအောက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ဆက်စပ်ထုတ်ဝေမှုကိုဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
1 XDM - အားကောင်းတဲ့ download accelerator နဲ့ video downloader
1.1 XDM ဆိုတာဘာလဲ။
XDM - အားကောင်းတဲ့ download accelerator နဲ့ video downloader
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် en စွမ်းအင် နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲရေးဤအက်ပ်သည်
"ဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်း 500% အထိတိုးမြှင့်ခြင်း၊ YouTube, Vimeo, Dailymotion, Google Video နှင့်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှဗွီဒီယိုများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ပြောင်းခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်သေဆုံးသော downloads များပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် downloads များကိုစီစဉ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်စွမ်းအားကောင်းသောကိရိယာတစ်ခု။".
ထို့အပြင်သူကသူနှင့်အတူperfectlyုံပေါင်းစပ်ကထပ်ပြောသည် Google Chrome၊ Mozilla Firefox Quantum၊ Opera၊ Vivaldi နှင့်လူကြိုက်များသော browser များ၊ downloads များကိုသိမ်း။ သိမ်းဆည်းရန် streaming ဗီဒီယိုများ ဝဘ်၏။ ထို့အပြင်၎င်းတွင်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသည် ဗီဒီယိုက converter download လုပ်ထားသောဗွီဒီယိုများကိုလူကြိုက်များအောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည် MP4 နှင့် MP3 အမျိုးအစားများ.
နောက်ဆုံးသူကလက်ရှိဖော်ပြသည် XDM အထောက်အပံ့ပါဝင်သည်
HTTP, HTTPS, FTP, DASH, HLS, HDS protocol များ၊
Firewall များ၊ Proxy Servers များ၊ PAC Script များအသုံးပြုခြင်း၊
အခြားသူများစွာသို့ဖိုင်ပြောင်းခြင်း၊ cookie ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်၊ ဒေါင်းလုပ်စီတန်းများ။
XDM လက်ရှိအဘို့အသွား တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းအရေအတွက်က 7.2.11 နှစ်ခုလုံးအတွက်ရရှိနိုင် installers နှင့်အတူ ကို Windows, como Mac OS နှင့် Linux။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်အစောပိုင်းဗားရှင်းကဲ့သို့သော installers များကိုလွယ်ကူစွာသိမ်းထားနိုင်သည် ဗားရှင်း 7.2.10 နှင့် 7.2.8 မိမိအခုနှစ် GitHub တွင်တရားဝင်ဆိုဒ်.
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွင်၊ ၎င်းကိုသင်၏ကူးယူပြီးပြီ အိတ်ဆောင်ဗားရှင်း အောက်မှာ ".jar" ပုံစံ အတွင်းကောက်ယူ ဂျာဗား (၁၁)။ ကြောင်း၏အားသာချက်ယူပြီးငါ့ MX Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း ဤပုံစံ၏အသုံးပြုမှုကိုထိထိရောက်ရောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။
XDM ကို run သောအခါ၊ graphical user interface (GUI) အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းသန့်ရှင်းပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်ဗားရှင်းအသစ်ရှိ၊ မရှိကိုညွှန်ပြလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့၎င်းကိုပြသရန်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုကိုလည်းပြသည် ပလပ်ဂင် ဒေါင်းလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ Web browser များ ပိုပြီးဘုံ။ ငါ့အမှု၌ငါလက်ရှိအသုံးပြုသည် Mozilla Firefox ကို, ဒါကြောင့်အောက်ပါ၏ installation ကိုညွှန်ပြခဲ့သည် ပလပ်ဂင်ငါအောင်မြင်စွာထည့်သွင်းပြီးပါပြီ။
သေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းသည့်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသောကြောင့်၎င်းတွင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်3ထူးချွန် features တွေ, အကယ်၍ သင်သည်ထိုအရာထဲသို့ ၀ င်ရောက်လိုပါကအောက်ပါကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အားအင်္ဂလိပ်စာဖြင့်ဖတ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည် link ကို သို့မဟုတ်လာမည့်ကိုကြည့်ပါ YouTube မှဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ, စပိန်အတွက်အကြောင်း XDM 2020 ၇.၂.၁၀ဗီဒီယိုမှာစကားလုံးတစ်ထောင်ကျော်ကိုရှင်းပြထားလို့ပါ။
၎င်းသည်အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ပျမ်းမျှ download speed ၅ ကြိမ်မှ ၆ ဆအထိတိုးလာသည်။
ချိတ်ဆက်မှုပြproblemနာ၊ ပါဝါပြတ်တောက်ခြင်း (သို့) session သက်တမ်းကုန်ခြင်းတို့ကြောင့်ပျက်စီးခြင်း (သို့) အသေအချကူးခြင်းများပြန်လည်စတင်ခွင့်ပြုသည်။
download လုပ်ပြီးသည်နှင့် clipboard monitoring၊ အလိုအလျောက် antivirus စစ်ဆေးခြင်းနှင့် system shutdown တို့ပါဝင်သည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «XDM (Xtreme Download Manager)»၊ အင်တာနက်မှဖိုင်ဖိုင်များစီမံခန့်ခွဲမှုကိုတိုးတက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ GNU / Linux Distros တွင်သုံးရန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးအစွမ်းထက်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » XDM - GNU / Linux အတွက် Accelerator နှင့် Video Downloader ကို download လုပ်ပါ
Jorge Sossa ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုဖမ်းမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာများကိုကြားခဲ့ပြီ၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားကြည့်မည်။
Jorge Sossa အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ, Jorge ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်၏ GNU / Linux Distro တွင်၎င်းသည်သင့်ကိုကောင်းမွန်စွာအစေခံနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
Miguel Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
Video DownloadHelper plugin နှင့် "Helper App" ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ဖွင့်ထားသောဘရောင်ဇာကိုသာသုံးနိုင်သည်။